Accueil > Gazetin'ny nosy > Alain Razafimbelo : Mbola fanendrena tsy nisy fanadihadiana koa
Alain Razafimbelo : Mbola fanendrena tsy nisy fanadihadiana koa
Mitohy ny fanendrena tompon’andraiki-panjakana ambony tsy misy fanadihadiana. Voatendry ny alarobia teo, nandritry ny fivorian’ny filankevitry ny minisitra, avy amin’ny tolo-kevitry ny minisitry ny fitaterana, ho mpandrindra ankapobeny ny tetikasa eo anivon’ny ministeran’ny fitaterana i Alain Razafimbelo. Efa mpikambana tao amin’ny Fahefana avon’ny tetezamita (CST) izy tamin’ny tetezamita ary efa minisitry ny asa vaventy koa. Anjaran’ny RPSD izy tamin’izany. Taorian’io dia voatendry ho isan’ny diplaomaty tany amin’ny masoivohom-panjakana Malagasy tany Alemana izy.
Asa na ireo dingana faramparany goavagoavana ireo no nahasodoka ny filankevitry ny minisitra ka nanaiky ny tolokevitry ny minisitry ny fitaterana na tena tsy manana olona hotendrena amin’io andraikitra io ny fitondram-panjakana fa mibaribary ny tsy fananan’ny mpitondra ambony amin’izao fotoana traikefa momba ny fahafantarana ny olona tendrena. Sa izay ilay hoe “tsy mifanary ny mpinamana na inona zava-nisy na inona?”
Tsorina fa nalaza ratsy ho tsy nanao afa-tsy kinamanamana izy tao amin’ny ministeran’ny asa vaventy izay notantaniny. Ny RPSD no nibaiko azy ary tafiditr’izany baiko izany indrindra ny fitantanam-bola tao. Raha lasa niasa tany amin’ny masoivohom-panjakana Malagasy tany Alemana tany indray izy dia ny afera no nanavanana azy. Nialokalofany ny maha-diplaomaty azy, ary ny vadiny rahateo, solombava hatramin’ny fitondrana HVM ka mandrak’ankehitriny (Goulamaly). Zary lasa masoivohon’ny Parlemanta Malagasy mandeha mankany ivelany matetika izy tamin’ny fitondrana HVM. Nialokalofan’ireo izany toerana nananany izany nanaovana asa fanondranana. Raha manao fanadihadiana ianareo mpitondra ambony hoe “iza avy no tena mpanondrana sokatra avy eto Madagasikaera?”, dia hibaribary avokoa ny ao anatiny.
Ny mpitolona ka nametraka ny fitondrana ankehitriny, na faha-tetezamita na taorian’ny fifidianana aloha dia anjorom-bala hatrany fa ny mahitahita hatrany no mahazo avara-patana.